‘संविधानको भावना अनुरुप सहकारी ऐन संशोधन गर्नुपर्छ’
अन्तर्वार्ता | 2021-02-18 Share
नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून)मा १४ वर्ष सम्म संचालक र महासचिवको भूमिका निर्वाह गर्नुभएका (विघटित ) प्रतिनिधिसभाका सांसद घनश्याम खतिवडा संसदको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सदस्य हुनुहुन्छ । मोरङ जिल्लाको क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुभएका सांसद खतिवडा सहकारी उपसमितिको संयोजक समेत हुनुहुन्छ । उहाँ सहकारी ऐन, २०७४ ले संविधानको तीन खम्वे अर्थनीतिको भावना प्रतिनिधित्व नगरेकाले संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुहुन्छ । यद्यपि ऐनमा भएका व्यवस्था कुनै समूहको स्वार्थपूर्ति गर्न सहज बनाउनका लागि भने संशोधन गर्न नहुने उहाँको विचार छ । सहकारी संस्था खोलेर व्यक्तिगत स्वार्थका लागि दुरुपयोग गर्ने संचालक र नियमन गर्न नसक्ने सहकारी विभागका कारण सहकारी क्षेत्रमा समस्या उत्पन्न भएको उहाँको ठम्याई छ । प्रस्तुत छ सांसद खतिवडासंग सहकारीका समसामयिक विषयमा सहकारी सञ्चार मासिक र सहकारी सञ्चार डट कमका लागि हिरा बस्नेतले गर्नुभएको कुराकानीको सारः
कोरोना महामारीको समयमा सहकारीले सदस्य र समाजको हितका लागि खेलेको भूमिका कस्तो पाउनुभयो ?
–झट्ट हेर्दा सहकारीले आर्थिक क्रियाकलाप मात्र गरेको जस्तो देखिन्छ । तर यसले सदस्यको आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक उन्नयनका लागि काम गरेको हुन्छ । सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत सहकारीले राहत वितरण गरेको देखियो । सवै सहकारीले नसकेपनि केही सहकारीले सदस्यलाई घरदैलोमा पुगेर सेवा दिए । कोरोना भाइरस आउँदैछ भन्ने पूर्वानुमान नभएकाले सहकारीले महामारीसंग जुध्नका लागि योजना बनाएका थिएनन् । तरपनि सहकारीले समुदायमा कोरोना भाइरसको बारेमा जनचेतना जगाउनु र सदस्यको जीविकोपार्जन प्रति सम्वेदनशील भएर आपतकालीन सेवा प्रवाह गर्नु राम्रो पक्ष हो ।
सहकारीले तीन खम्बे अर्थव्यवस्था परिकल्पना गरेको छ । तर सहकारीको भूमिका निजीको भन्दा कमजोर छ नि ?
–सहकारीको योगदान नदेखिएको मात्र हो । राज्यले सहकारीको योगदान देख्नुपर्छ । मैले सांसदकोरुपमा रोस्टममा उभिएर सरकारसंग कुरा उठाईरहेको छु । सहकारीले सदस्यलाई प्रभावकारी वित्तीय सेवा दिनुका साथै अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान दिएका छन् । काठमाडौं वा ठूला शहरमा सहकारीको सिद्धान्तबाट विचलित भएका पचास साठी ओटा संस्थाले गरेको बद्मासीलाई उदाहरण लिएर ३४ हजार सहकारीलाई मूल्याङ्कन गर्न मिल्दैन । सहकारीको विभागीय मन्त्रालयमा भूमि र गरिवी निवारण जोडिएको छ । मन्त्रालयले ९० प्रतिशत काम भूमि सम्बन्धी गर्छ । बाँकी १० प्रतिशत सहकारी र गरिवी निवारणलाई छुट्टयाएको छ । सरकारले भूमि र सहकारीलाई फुटाएर अलग बनाउनुपर्छ । सहकारीलाई हेर्नका लागि छुट्टै मन्त्रालय बनाउन आवश्यक छ ।
सहकारी ग्रामीण क्षेत्र, विपन्न वर्ग र गरिव सम्म पुगेनन्, मध्यम वर्ग र शहर केन्द्रित भए भन्ने आरोप छ । तपाईंलाई सहकारी अभियान किन दुर्गम क्षेत्र, विपन्न वर्ग र गरिव सम्म नपुगेको हो जस्तो लाग्छ ?
–सहकारीको सिद्धान्त गरिव र विपन्न वर्गका मानिसलाई सेवा दिनका लागि ‘एकका लागि सबै, सबैका लागि एक’ भन्ने हो । सहकारी सदस्य केन्द्रित र समुदायमा आधारित हुनुपर्छ । आफ्ना मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तबाट निर्देशित हुनुपर्छ । काठमाडौंमा कैलाली, ताप्लेजुङ्ग, झापा, मोरङ, रौतहट लगायतका विभिन्न जिल्लाबाट पेशा व्यवसाय गर्न आएका मान्छेले सहकारी संस्था खोलेर फाईनान्स कम्पनी झैं चलाउने गरेको पाईन्छ । यस्ता संस्था घाटामा जाने अवस्था आएपछि संचालकले सदस्यको निक्षेप लिएर भागेका केही घटना पनि छन् । यसले सहकारी अभियानको बद्नाम गरेको छ । सहकारीले हाम्रो मुलुकको ग्रामीण अर्थतन्त्र र शहर बजारका विपन्न, निमुखा, गरिव वर्गका मानिसहरुको आर्थिक अवस्थालाई उकास्नुपर्छ । सहकारीलाई कम्पनी झैं चलाउन हुँदैन । धेरै पुँजी हुने साथीहरुले बैंक, फाईनान्स वा कम्पनी खोलेर ठूला उद्योग व्यवसायमा लगानी गर्नुस् । सहकारीमा पैसा राखेर व्याज खाने प्रवृत्तिले केही विकृति आएको साँचो हो । हाम्रो मुलुकको सन्दर्भमा ग्रामीण अर्थतन्त्र उकास्ने र गरिवी न्यूनिकरण गर्ने एउटा प्रभावकारी औजारकोरुपमा सहकारीलाई प्रयोग गर्नुपर्छ । यही भावना बोकेर संविधानले सार्वजनिक, निजी र सहकारी संलग्न भएको तीन खम्बे अर्थनीति अंगीकार गरेको हो । सहकारी संस्था खोल्न र संचालन गर्नमा भएको सहजता र करमा दिइने छुटले गर्दा बास्तविक सहकारीलाई केही नक्कली सहकारीले अन्याय गरिरहेका छन् ।
मुलुकको ग्रामीण भेगमा बस्ने किसानहरुले आफैं धेरै पुँजी संकलन गरेर सहकारी खोल्न सक्दैनन् । तर किसानलाई बिउ, मल खाद उपलब्ध गराउने देखि उत्पादनको बजारीकरणका लागि समेत सहकारीको आवश्यकता छ । ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि सहकारी प्रवर्द्धन गर्ने काममा राज्यको कमजोरी देखिन्छ नि ?
– यसमा सरकारको ठूलो कमजोरी छ । म सत्तारुढ दलको सांसद हो । तर बिट लुकाएर कुरा गर्नुपर्ने छैन । मन्त्रालय र विभागले ठूलो हेलचेक्र्याई गरेको देख्छु । सहकारी संस्थालाई सेवा सुविधा दिने र प्रवद्र्धन गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो । छोराछोरीलाई पालन पोषण गर्ने, शिक्षा दीक्षा दिने, हुर्काउने जिम्मेवारी तीनलाई जन्माउनेको हो । सानोमा गल्ती गर्दा सुधार गर्ने र बालिग भएपछि ठूलो अपराध गर्‍योभने कानुन अनुसार दण्डित गर्ने सघाउने जिम्मेवारी अभिभावककै हो । सहकारी राज्यले दर्ता गर्ने भएकाले अनुगमन नियमन गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो । त्यसैले यो कुरामा सरकार चुकेको छ । अहिले मुलुकमा विभिन्न उद्देश्य (विषय) राखेर खुलेपनि अधिकांश सहकारीले सदस्यबाट बचत लिने, त्यही ऋण परिचालन गर्ने र प्राप्त भएको ब्याजबाट संस्था चलाउने गरिरहेका छन् । यस्तोमा मात्र रमेर हामीले सहकारीबाट उन्नती गर्न सक्दैनौं ।
हाम्रो देशमा सहकारीले उत्पादन गरेर आयात भईरहेको कुन बस्तु प्रतिस्थापन गर्नसक्छ भनेर पहिचान गर्नुपर्छ । अहिले बजारमा प्याजको हाहाकार छ । सहकारी मार्फत प्याज खेती गरेर उत्पादन भएको प्याज सरकारले किनेर शित भण्डारमा राख्ने र बजारमा अभाव भएको बेला आपूर्ति गर्ने हो भने उपभोक्ताले राहत पाउँछन् । सरकारले केही अनुदान दिएर गाउँमा उत्पादन गर्ने सहकारीलाई शहरमा वितरण गर्ने सहकारीसंग जोडिदिनुपर्छ । यसो गर्न सके धेरैले रोजगारी पाउँछन् र विचौलियाको चलखेल पनि अन्त्य हुन्छ । बजारमा सानो समस्या आउने वित्तिकै भाउ आकाशिने र खुकुलो भएपछि किसानले लागतको मूल्य पनि नपाएर उत्पादन नालीमा फाल्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा किसानलाई बचाउन सहकारी लागेन भने धेरै कुरा नारामा मात्र सीमित हुनेछन् ।
सहकारीसंग भूमि पनि जोडिएको छ । मन्त्रालयले भूउपयोग ऐन कार्यान्वयन भए नभएको समीक्षा गर्नुपर्छ । यसमा मन्त्रालय चुकेको छ । अहिले उत्पादनशील जमिनमा बालुवा हालेर घडेरी बनाईएको छ । जमिन उत्पादनको साधन हो । कसैको सम्पत्ति होईन । तर हामी सबैभन्दा ठूलो सम्पत्तिकोरुपमा जमिनलाई चलाईरहेका छौं । राज्यले जमिनको उपयोग सम्बन्धी प्रष्ट नीति बनाउनुपर्छ । भूमि बैंक बनाएर कमाउन नसक्नेको जमिन सहकारी संस्थालाई उपलब्ध गराउनुपर्छ । त्यस्तो जमिनको विशेषता हेरेर आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन हुने खालको बस्तु उत्पादन गर्न लगाउनुपर्छ । धनकुटाको चित्रे, सिधुवा, बसन्तपुर क्षेत्रको बुकी फूल मात्र उम्रिने डाँडामा सहकारीले काउली फलाएर बंगलादेश निर्यात गरिरहेका छन् । सहकारीले गर्न सक्छन् । तर राज्यले अनुकुल वातावरण बनाईदिनुपर्छ ।
सहकारी संस्थामा समस्या आउनुमा तपाईं कस्को कमजोरी देख्नुहुन्छ ?
–सहकारी संस्थालाई सदस्य र समुदायको फाईदाका लागि नभई आफ्नो फाईदाका लागि दुरुपयोग गर्ने व्यक्तिहरुको त्रुटि छ । यसैगरी आफूले दर्ता गरेको सहकारी कसरी चलिरहेको छ भनेर हेर्न नसक्ने सहकारी विभागलाई पनि दोषी देख्छु । गलतरुपमा चलेका सहकारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुप¥यो । ठीक तरिकाले चलेका सहकारीलाई मूल्याङ्कन गरेर राज्यले अनुदान लगायतको सहायता दिनुपर्छ । अहिले सरकारले अनुदान दुरुपयोग गर्ने सहकारीलाई अनुदान दिने तर बास्तविक काम गर्ने सहकारीलाई चाहिँ सघाईरहेको छैन ।
सहकारी ऐन पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुन नपाउँदै संशोधनको प्रकृया अगाडि बढेको छ । तपाईंले ऐनमा संशोधनको आवश्यकता देख्नुभएको छ कि छैन ?
–सहकारी ऐन, २०४८ लाई प्रतिस्थापन गर्न जारी भएको सहकारी ऐन, २०७४ संविधानको भावना अनुकुल छैन । पुरानैलाई दस्तावेजलाई अलिकति जोड्गास गरेर ल्याईएको छ । ऐनमा धेरै त्रुटिहरु छन् । यो ऐन विभिन्न क्षेत्रसंग सम्बन्धित ऐनहरुसंग बाझिएको छ । गाउँपालिका र नगरपालिकालाई स्थानीय तह वा स्थानीय सरकार नमानेर स्थानीय निकाय ठानेर सहकरी ऐन ल्याईएको छ । मुलुकको संविधानले संघका साथै प्रदेश र स्थानीय तहलाई समेत सहकारी ऐन बनाएर कार्यान्वयन गर्ने अधिकार दिएको छ । त्यही भएर ऐन अहिलेको सन्दर्भमा मिलेको छैन । यसलाई अधिकार बाँडफाँटको हिसाबले मिलाएर यसमा भएका सहकारीको अहित हुने बुँदाहरु संशोधन गर्नुपर्छ ।
सहकारी ऐनमा भएका विवादरहित दफाहरु कार्यान्वयन गर्न राज्य र सहकारी अभियान इमान्दार देखिदैनन् नि ?
–सहकारी अभियान भित्र धेरै साथीहरु इमान्दार हुनुहुन्छ । तर केही साथीहरुले निजी स्वार्थ प्राप्तिका लागि सहकारीलाई भजाईरहेको देख्दा खिन्न लाग्छ । सन्दर्भ व्याजदरको विषयमा सहरकारी नियमावली पनि त्रुटिपूर्ण छ । सहकारी संस्था नाफाका लागि होईन । सेवा दिनका लागि नाफा कमाउने हो । कम्पनी जस्तो नाफा कमाएर लाभांश वितरण गर्ने उद्देश्यले मात्र संचालन गर्ने हो भने सहकारी हुनेखानेको संस्था हुन्छ । हुँदा खानेका लागि केही दिन सक्दैन । बचतकर्ता निराश नहुने र ऋणीलाई पनि सरल हुनेगरी ब्याज निर्धारण गर्नुपर्छ । एकदमै कम, तीन चार प्रतिशत मार्जिन लिएर संस्था संचालन गर्नुपर्छ । एउटै क्षेत्रमा भएका स–साना संस्थाबीच एकीकरण गरेर दरिलो संस्था बनाउनुपर्छ । जुन विषयका लागि दर्ता भएको हो, त्यही काम गर्नुपर्छ । दुग्ध सहकारी भनेर दर्ता गरेको संस्थाले एक लिटर पनि दूध संकलन नगरी बचत ऋणको मात्र कारोबार गर्छ र यसका सदस्यले अन्यत्रबाट दूध किनेर खान्छन् भने यसलाई बिघटन गरेर बचत ऋण सहकारी बनाए हुन्छ । दुग्ध सहकारीले दूध उत्पादन, बजारीकरण र प्रशोधन गर्नुपर्छ । मुलुकमा कृषि सहकारीलाई व्यवस्थित बनाउन सके थप रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । स्याउ र तरकारी फल्ने ठाउँ अहिले झारले ढाकेको छ । सिँचाईयोग्य खेत बाँझै छन् । आफ्नो जग्गा बाँझो छाडेर अरब जाने प्रवृत्ति रोक्न सरकारले त्यस्तो जग्गामा सहकारीमार्फत खेती गर्न उत्प्रेरित गर्नुपर्छ । सहकारीले सामुहिक ऋण लैजाउ र यो उद्यम गर भनेर सरकारले ‘स्किम’ दिनुपरो । आदेश मात्र जारी गर्ने रजिष्ट्रार र सरकारी अनुदान लगेर खाने वा मान्छेलाई ठग्ने सहकारीको काम छैन ।
सहकारी अभियन्ताहरु ‘बैंकर्स’हरुको ‘लबिईङ्ग’ले गर्दा सहकारीलाई नियन्त्रण गर्ने कानुन आएको भन्ने टिप्पणी गर्छन । तपाईंलाई अहिले सम्म कसैले आवश्वासन, प्रलोभन वा दवाव दिएन ?
–मलाई कसैले प्रलोभन देखाउने आँट गर्नसक्दैन । मेरो चरित्र र व्यक्तित्वले गर्दा कसैले कुरा राख्न सक्दैन । म एक्लैले काम गर्ने पनि होईन । मन्त्रालयले मस्यौदा ल्याउने हो । संसदका समितिहरुमा दफावार छलफल हुन्छ र संसदको पूर्ण बैठकले पारित गर्छ । सहकारी ऐन संशोधनको आवश्यकता छ । अभियानलाई दरिलो पार्न, स्थायित्व दिन र संविधानको भावना अनुसार सहकारी तीन खम्वे अर्थनीतिको एउटा दह्रो खम्वा हो भन्ने उत्तरदायित्व बहन गर्नका संशोधन हुनुपर्छ । कसैलाई फाईदा वा घाटा पुर्‍याउने उद्देश्यले ऐनका दफा संशोधन गर्न हुँदैन ।
बचत ऋण बाहेकका अन्य विषयका सहकारीले ऐनमा भएको मुख्य कारोबारको व्यवस्था हटाउन माग राख्दै आएका छन् । उत्पादन, प्रशोधन, वितरण लगायतको क्षेत्रमा काम गर्छु भनेर दर्ता भएका सहकारीले बचत ऋणको मात्र काम गर्नु उचित हो र ?
–यो विलकुल गलत कुरा हो । मुख्य कारोबारको व्यवस्था उचित छ । बरु प्रतिशत मिलाउन सकिन्छ । सल्लाह गरौं, अभियानको अनुभव पनि आउला । बचत ऋणको कारोबार कम भयो भने ३० लाई ३५ प्रतिशत बनाउँला । तर विषयगत सहकारी संस्था आफ्नो उद्देश्य अनुरुप ७० देखि ७५ प्रतिशत मुख्य कारोबारमा केन्द्रित हुनुपर्छ । त्यसका लागि आर्थिक गतिविधि गर्न संस्थालाई ३० प्रतिशत बचत ऋणको कारोबार गर्न दिने र बाँकी काम मुख्य कारोबारको गर्नुपर्ने व्यवस्था ठीक छ ।
सहकारीको नियमन गर्ने जिम्मेवारी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिईएको छ । तर अनुगमनको क्रममा यी तीन तहबीच समन्वय हुनेगरेको छैन । सहकारीलाई नियमन गर्ने विद्यमान प्रणाली कति प्रभावकारी छ जस्तो लाग्छ ?
–हामीले प्रणाली बसाल्न नसकेर त्रुटि भएको हो । सहकारीलाई नियमन गर्न नयाँ ढंगको संरचना आवश्यक छ । राष्ट्र बैंकको समेत प्रतिनिधित्व हुनेगरी ‘सेकेन्ड टियर ईन्स्टिटुसन’ खडा गर्न जरुरी छ । यही संरचना मार्फत सहकारीलाई उचित मार्गनिर्देश गर्न, नियमन गर्न र प्रविधिको हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ । अहिलेको हाम्रो संरचना र विभागको कार्यशैलीबाट सहकारीको नियमन सम्भव छैन । नियामक निकाय बनाएर गयौं भने सहकारीमा नतिजा ल्याउन सकिन्छ । प्रारम्भिक सहकारीलाई तिमीले यो काम सही गर्‍यौ, यो काम गलत गर्‍यौ भनेर भनिदिने मान्छे समेत नभएर बिग्रिएको हो । राज्यका तीनै तहले ध्यान दिनुपर्छ । गलत काम गर्ने सहकारीलाई दण्डित गर्नुपर्‍यो । दोहोरो सदस्यता अन्त्य गर्ने प्रावधान राम्रो छ । अहिले एउटा व्यक्ति विभिन्न सहकारीको सदस्य बनेर ऋण लिने अनि नतिर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । सहकारीले सदस्यको सम्पूर्ण वित्तीय आवश्यकताको परिपूर्ति गर्नुपर्छ । यसैगरी सहकारीमा भ्रष्टाचार र गैरकानुनी काम गरेर कमाएको पैसा थुप्रिएको आरोप लाग्ने गरेको छ । सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्छ । तर सहकारीले पनि सफेद् काम गरिरहेका छैनन् । धेरै कुरामा सहकारी सच्चिनुपर्छ ।
सहकारीका छाता संघहरु अभियान भित्रका कमजोरीबारे टिप्पणी गर्न हिचकिचाउँछन् । सहकारीमा सुशासन कायम राख्ने जिम्मेवारी प्रतिनिधिमुलक संघहरुको पनि होईन र ?
–म नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून)मा १४ वर्ष सम्म संचालक र महासचिव भएर बसेँ । तीन वर्ष सल्लाहकारको भूमिकामा रहेँ । म संघमा हुँदा सबै राम्रो थियो भनेर घमण्ड गर्दिनँ । त्यसबेला भएका गल्तीलाई पनि सच्याउँ । तर अहिले छाता संघमा भएका केही साथीहरुले दिएको अभिव्यक्ति सुन्दा उहाँहरुको सहकारीप्रतिको बुझाईमाथि दया लागेर आउँछ । केही साथीहरु विज्ञ हुनुहुन्छ । तर उहाँहको विज्ञता ओझेल परेको छ । छाता संघहरुले प्रारम्भिक संस्थाको अनुगमन गर्नुपर्‍यो । उहाँहरुले अभियानलाई सच्याउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसंग समन्वय गर्नुपर्छ । सहकारीमैत्री नियम कानुन बनाईदिनुस् भनेर स्पष्ट धारणा दिनुपर्‍यो । अहिले एउटा समूह आउँछ सन्दर्भ व्याजदर ठीक छैन भनेर जान्छ । अर्को समूह आउँछ र यसलाई जसरी भएपनि कार्यान्वयन गरौं है भनेर जान्छ । यसरी सहकारी अभियान भित्रको एकता र साझा दृष्टिकोण आउन सकेको छैन ।
नेपालमा दशकौं देखि समाजवादी विचारधार बोक्ने दलहरुले राज्य व्यवस्था संचालन गरिरहेका छन् । तर उनीहरुले लोकतान्त्रिक समाजवादको प्रभावकारी ‘मोडेल’को रुपमा रहेको सहकारीलाई चाहिँ सधैं उपेक्षा गर्दैआएका छन् नि ?
–हिजोको काँग्रेस, नेकपा माओवादी, एमाले, सद्भावना पार्टी वा आजको नेकपा, राजपा जे भनेपनि स्टेसन फरक–फरक होला, गाडिको नाम फरक–फरक होला तर यात्रा गर्ने पेसेन्जर र गाडि चलाउने ड्राईभर तीनै हुन् । सबै मान्छे तीनै हुन् । त्यसैले सोचाईमा सामन्ती चिन्तन छ । कम्यूनिस्ट पार्टीका सदस्यहरुमा पनि सामन्ती चिन्तन ठेलाठेल छ । नारामा मात्र समाजवादको कुरा ल्याए । समाजवादी अर्थव्यवस्थामा निजी स्वामित्वमा जमिन हुँदैन । जमिन राज्यको स्वामित्वमा रहनुपर्छ । हामीले संविधानमा समाजवादी अर्थव्यवस्था लेखेको पाँच वर्ष भईसक्यो । म अरु पार्टीको मात्र कुरा गर्दिनँ, यसबीचमा मेरै पार्टीले पनि समाजवादी अर्थव्यवस्थालाई मुखरित गर्ने बजेट ल्याएको छैन । प्राकृति श्रोतमाथि राज्यको स्वामित्व हुनुपर्छ । जनतालाई रोजगारी दिनुपर्छ । तपाईं रोशी खोला वा मेरै गाउँको चिस्याङ खोलामा गएर हेर्नुस्, पाखुरा र तिघ्रा ठूला भएकाले खोला कब्जा गरेर राज्यको सम्पत्ति दनादन लुटीरहेको छ । राज्य अनदेखा भएर बसेको छ । म प्राकृतिक श्रोत व्यवस्थापन समितिबाट गएको थिएँ, साझेदारी बन, वैज्ञानिक बन भनेको छ, डँडाल्नुमा पार्टीको कार्यकर्ताको बोर्ड भिरेर तिघ्रे पाखुरेले सखुवाको रुख काटीरहेका छन् । संविधानमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानपाउने अधिकारलाई मानिसको मौलिक हक भनेर राखिएको छ । तर व्यवहारमा हाम्रा पाईला समाजवादी अर्थव्यवस्था तिर चलेका छैनन् । सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष र राजनीति सोच भएका कसैका पाईला चलेनन् । संविधान निर्माण गरेपछि अघिल्लो पुस्ताले विश्राम लिनुपथ्र्यो । समाजदी अर्थव्यवस्थाको युगको नेतृत्व पछिल्लो पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नुपथ्र्यो । अघिल्लो पुस्ताका नेताले आफू पछि आउने नेतृत्व उत्पादन गर्नुपर्ने हो । तर म पछि यो आउँछ भनेर मुन्टो चिमोट्ने प्रवृत्ति राजनीतिमा हावी भएको छ । हाम्रो मुलुकको अर्थतन्त्रलाई दरिलो बनाउने हो भने पाँच ओटा ‘टी’ लाई ध्यान दिनुपर्छ । टिम्बर, टुरिज्म, टी (चिया), टेक्निकल एजुकेशन र टिमवोर्कलाई प्रवद्र्धन गर्ने हो भने समृद्धि सम्भव छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकामा बहुउद्देश्यीय सहकारीको समन्वय समिति
पाँच तारा साकाेसकाे १४औं वार्षिक साधारणसभा, सदस्यलाई १५ प्रतिशत लाभांश दिने
नेफ्स्कूनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकाल र सहकारी बैंकका सीईओ गुरागाईंलाई जनसेवा श्री पदक
बुढानिलकण्ठ नगरपालिकामा बहुउद्देश्यीय सहकारीको समन्वय समिति
अतिरिक्त शुल्क माग्ने सहकारीमा सदस्य नबन्न रजिष्ट्रार कार्यालयको सुझाव
काठमाडौं जिल्ला बहुउद्देश्यीय सहकारी संघले नगर समन्वय समिति गठन गर्ने